Kooxda Soo Saarista Xogta Soosaarayaasha - Shiinaha Shiinaha Qeybta Soo Qaadista Xogta, Warshadaha
DJGZ23-SW10 concentrator waa wax soo saarka smart ee ugu dambeeyay ee ay soo saartay Senwei. Waxay isku daraysaa tikniyoolajiyada isgaarsiinta mobilada casriga ah, tikniyoolajiyada kumbuyuutarka, tikniyoolajiyada cabirka awooda. Ku dhiirrigali GPRS (CDMA ama shabakad fiiqan) iyo xarunta kormeerka si loo xaqiijiyo gudbinta xogta fog, loo helo xog ururinta iyada oo loo marayo soonka AD xajmiga, iyo xaqiijinta macluumaadka, duubista xogta iyo kaydinta xogta iyada oo loo marayo hawlgalka processor-ka dhexe.
SW-TCP232-304 waa RS485 serial port port server, cabbir yar, qaali ah oo la xakameyn karo, garawsado RS485 ilaa shaqada gudbinta daah furnaanta Ethernet; oo leh 1 deked Ethernet, heerka 10 / 100Mbps; taageerada dib u bilawga waqtiga dib-u-bilaabida, DHCP waxay si otomaatig ah u heshaa magaca magaca 'IP DNS' xalka magaca, cusbooneysiinta fog, shaqada dekeda meysanka ah; taageer xogta garaacista caadada ah si loo tirtiro xiriirada aan faa'ido lahayn; xirmo isdiiwaangalin oo gaar ah si loo ogaado xaalada isku xirnaanta
SW-GPRS232-734 waa RS485 wareejinta wareejinta korantada GPRS DTU, taasoo xaqiijineysa howlaha wareejinta daah-furka labada waddo laga soo bilaabo RS485 ilaa GPRS; waxay taageertaa marin u helidda shabakadda GSM / GPRS; Ilaalinta go'doominta RS485, awoodda ka hortagga faragelinta; waxay taageertaa 4-kanaal Socket isku mar; taageera TCP, UDP; taageerida gudbinta SMS hufan, gudbinta shabakad, HTTPD, UDC iyo qaabab kale; taageero aasaasiga ah ee hagida aasaasiga ah iyo jaangooyada tilmaamaha; taageer 5-36V voltaro ballaadhan, DC iyo xulashooyinka awooda korantada.